““၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ (၂)”” | ဥက္ကာကိုကို
““၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ (၂)””
Posted by oakkarkoko on August 19, 2012
Posted in: ကဗျာ.	Tagged: သရော်စာ.	Leaveacomment
အာပင်ဘွိုင်းမှ တိုက်သောရေကို တနင့်တပိုးသောက်ပြီးသော် နင်ဂျာများ ထုံးစံအတိုင်း ၀ှီး… ၀ှီး… ၀ှစ် ၀ှစ် ဟုအသံစုံမြည်ကာ လမ်းပေါ်က တက္ကစီများပေါ်သို့ ခုန်တက်သွားကြပြန်သည်။
ပါးစပ်မှလည်း ““မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ဖိုက်လို့မရ.. ဘီယာနဲ့တိုက်မှရမည်… ဟွင်းဟွင်းဟွင်း”” ဟူ၍လည်း အံကြိတ်ကြုံးဝါးသွားကြသည်။
တက္ကစီခမပါသော နင်ဂျာခုနှစ်ယောက် ကားနောက်ဖုံးများတွင် တွယ်ကပ်ပါသွားကြ၏။
သို့နှင့် ဗိုလ်ခြေတစ်ရာမြို့နယ်ရှိ သစ်ခွဟိုတယ်ရှေ့ ရောက်၏။ ဟိုတယ်နံရံများကို ချိတ်၍လည်းကောင်း၊ ပြတင်းပေါက်များကို
ရိုက်ခွဲ၍လည်းကောင်း၊ ပိုက်လုံးကို တွယ်တက်၍လည်းကောင်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် ၀င်ရောက်ကြကုန်၏။
အထဲသို့ရောက်သော် မာဖီးယားဂျိုကာအသင်း(Mafia Joker Association) မှ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးများ စုဝေးနေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် လက်နက်ပုန်းများ
ထုတ်ပြခြိမ်းခြောက်ကာ စာရွက်တစ်ရွက်တွင် အလိုမတူဘဲ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလေသည်။ သမ္မတ ဘပြောင်ဆီပို့ရန်ဟုလည်း ပြောသည်။
မာဖီးယားဂိုဏ်းသားများကားခြေဆောင့်သူဆောင့်၊ နှုတ်ခမ်းစူသူစူကုန်သည်။ နင်ဂျာများကား ဂရုမစိုက်။ လက်မှတ်စာရွက်များကိုယူ၍
၀ှီးဝှီး ၀ှစ်ဝှစ်မြည်ကာ ဟိုတယ်ပေါ်မှ ကျွမ်းပစ်ခုန်ချသွားကြ၏။
မြို့တော်ခန်းမအနီးက မြို့တော်ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်ပေါ်သို့ နင်ဂျာများရောက်လာပြန်သည်။ တာရာမင်းဝေငါးနှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ် ကဗျာဆရာများ
၀မ်းနည်းကြေကွဲနေသည်။ ဘက်ကြည့်မှန်ကြီးလည်း မည်သို့မည်ပုံရောက်လာသည်မသိ။ ကဗျာတက်ရွတ်နေတာတွေ့သည်။
““ကျောင်းနံရံတ၀ိုက်… ဒေါင်းအလံပြန်စိုက်မယ့်တစ်နေ့… ငါ… ငါ… ဟိုက် နင့်မေကလွှား…. နင်ဂျာတွေလာပြန်ပြီ””
ထိုသို့ အနက်ရောင်လောကသားနင်ဂျာများ မြို့အနှံ့မွှေနှောက်လိုက်ပြီး မကြာမီမှာပဲ ဗွိုက်စကိုဒဂါးမားနှင့် အာပင်ဘွိုင်းတို့ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်လေသည်။ အရှိန်ကောင်းနေသည့် နင်ဂျာများက မကျေနပ်သေး။ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုနှင့် တိုးတိုးကျိတ်ကျိတ် တိုင်ပင်ပြန်သည်။
မျောက်ဂျင်းနှိုက်(MJN) ဂိုဏ်းကလည်း ခေါင်းထောင်လာပြန်သည်။ ၀ိတ်လွန်ကိုကိုများနှင့် ဗိုက်ပူမမများအတွက် နင်ဂျာဝတ်စုံဆိုက်ဒ်ကြီးများကို ထပ်ဝေကြသည်။
ဒီကြားထဲမှာ ““အတုတွေ ချာချာလည်ရင်း ပြောင်ပြီ”” အမည်ရသည့် ကောင်စီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စိတ်ထဲပေါ်သည့် နာမည်ကောက်တပ်ကာ အစိုးရက ဖွဲ့စည်းလိုက်လေ၏။ မာဖီးယား ဂျိုကာ အသင်းမှ ဂိုဏ်းချုပ်တချို့က သတင်းစာကိုကောက်ကိုင်ကာ ““ဟယ်…နာ့နာမည်ကြီးပါလားဟရို့”” ဟု အာမေဋိတ်ပြုကုန်၏။
ထို့နောက် ““ငါတို့ကို မပြောဘဲ နာမည်ထည့်တယ်… ရှက်ပါတယ်… ကရော် ကရော်””ဟု ဆိုကာ အတုတွေချာချာလည်ရင်းပြောင်ပြီ ကောင်စီမှ ထွက်စာတင်ကုန်၏။
ထို့ကြောင့် ကောင်စီလည်း မစမီကပင် ရပ်လေ၏။ သွားကြားထိုးတံကလေးကိုက်နေသော ၀ံသရမ်းလည်း ဒေါခီးလေ၏။ ဘိုးတော်ကြီး ဘဲရင့်ပင်ငွေလည်းအံကိုသာ နာနာကြိတ်လေ၏။ ““ဂျွတ် ဂျွတ်.. ဂတ် ဂတ် ဂတ်”” ဟူ၍။
ထိုအချိန်တွင် မာဖီးယားဂျိုကာအသင်း၏ (တစ်နိုင်ငံလုံး ကျွတ်ကြဲသွားသည့်) နိုင်ငံလုံးကျွတ် ညီလာခံကြီးကို ခေါ်ယူ၍ ဂိုဏ်းချုပ်များကို ရွေးချယ်ကြလေသည်။
မာဖီးယားဂိုဏ်းချုပ်များ မည်သူတွေဖြစ်နိုင်မည်ကို ၀ိုင်းဝန်းခန့်မှန်းကြသော် ခန့်မှန်းသူတို့ မမှန်လျှင်ဝမ်းနည်းကုန်မည်စိုးသောကြောင့် ခန့်မှန်းကြသည့် အတိုင်းပင် ရွေးချယ်လိုက်ကြ သည်ကို တွေ့ရလေ၏။
အတင်းထောက်။ ။ ညီလာခံမှာ ထူးခြားတာလေးရှိရင် ပြောပြပါဦး။
မာဂျိုဥက္ကဌ ။ ။ ထူးခြားတာကတော့ ဒံပေါက်တွေအများကြီး ပိုနေတာပါပဲ။
အတင်းထောက်။ ။ ဂိုဏ်းချုပ်ရွေးချယ်ပုံလေး။
မာဂျိုဥက္ကဌ။ ။ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးတာ။ ဖယောင်းမသုတ်ဘူး။ စီစီတီဗီတပ်မထားဘူး။
အတင်းထောက်။ ။ ဘယ်သူတွေအရွေးခံပါသလဲ။
မာဂျိုဥက္ကဌ။ ။ ဒီလူတွေပါပဲ။
အတင်းထောက်။ ။ ဘယ်သူတွေ ရွေးချယ်ခံရပါသလဲ။
အတင်းထောက်။ ။ ရွေးချယ်ခံရသူတွေထဲမှာ ဆရာတပည့်၊ မောင်နှမ၊ သားအမိ၊ ညီအကို၊သားအဖ စတဲ့အပူးတွေပါနေတယ်ဆို။
မာဂျိုဥက္ကဌ။ ။ အဲလိုမခွဲခြားပါဘူး။
အတင်းထောက်။ ။ ဒါဆို ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။
မာဂျိုဥက္ကဌ။ ။ မိသားစုတစ်စုလုံးပါ။
အတင်းထောက်။ ။ ဒုဥက္ကဌနဲ့ အတွင်းရေးမှူးတွေက ဘယ်သူတွေပါလဲ။
အတင်းထောက်။ ။ အဲဒီ ဒီလူတွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။
မာဂျိုဥက္ကဌ။ ။ ဒီလူတွေပါပဲဆိုတာ ဒီလူတွေပဲပေါ့ကွ လဒရဲ့။
အတင်းထောက်။ ။ ဒီလူတွေပါပဲလို့ အများကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ကြားမိပါသလား။
မာဂျိုဥက္ကဌ။ ။ ကြားပါတယ်။ သူတို့ခန့်မှန်းတာမမှန်ရင် ၀မ်းနည်းကုန်မှာစိုးလို့ အားနာပါးနာနဲ့ မှန်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပါ။
အတင်းထောက်။ ။ ကျေးဇူးကြီးမားလှပါပေတယ်ခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ- ဥက္ကာကိုကို (သံချောင်းနှင့် မင်းထက်စံတို့ မဆုံတွေ့နိုင်သဖြင့် ကျနော်ပဲဆက်ရေးလိုက်ပါသည်)
← မီဒီယာနှင့် ဖင်ကိစ္စ
၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ (ဇာတ်သိမ်း) →